Uyilandela njani inkcazo yeHuawei P30 | I-Androidsis
Uyilandela njani inkcazo yeHuawei P30 bukhoma
Kule veki sinomnyhadala omkhulu wokuboniswa kweHuawei P30. Isiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina sizoya ikho ngomso, ngolwesiBini, nge-Matshi 26, kumsitho oseParis, njengoko kuqinisekisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Isiphelo ekulindeleke ukuba siphele, kuba ithembisa ukuba yenye yokutsiba kumgangatho wophawu. Umsitho ngokuqinisekileyo abantu abaninzi bafuna ukukwazi ukuwulandela ngqo. Into enokwenzeka.
Kuba njengesiqhelo, yenziwe ukuba ifumaneke indlela yokulandela umboniso woluhlu bukhoma yeHuawei P30 ngokupheleleyo. Umnyhadala oqinisekileyo wokuvelisa umdla omkhulu phakathi kwabasebenzisi. Singayilandela njani le ntetho yeefowuni?
Iya kwenzeka kwiYouTube, kwijelo elisemthethweni lophawu. Njengakwamanye amaxesha, babeka usasazo ngqo kuthi. Ke ngekhe siphoswe yile ntetho yeHuawei P30, kulo msitho ubuseParis. Ikhonkco linokufumaneka apha ngezantsi.
Umnyhadala wokubonisa kwezi Huawei P30 unika qala ngo-14: 00 ixesha lendawo eParis. Ke kubasebenzisi abahlala kwamanye amazwe, kubalulekile ukuba bakuthathele ingqalelo oku, ukuze ungaphoswa kukusasazwa ngqo kwesi siphelo sophawu lwesiTshayina. Uluhlu oluphezulu lwazo kubekho ukuvuza okuninzi.
Kwezi veki besifunda iinkcukacha ezininzi malunga neefowuni. Uluhlu apho inkampani ifuna ukugcina intengiso entle ababenayo kunyaka ophelileyo. Ukongeza ekuboniseni inkqubela phambili enkulu kumgangatho esiwubonayo kweli candelo lakhe.
Ke ezi Huawei P30 zibizelwe ukuba zibe yimpumelelo entsha kwinkampani. Ngaphezulu nje kweeyure ezingama-24 siya kuba nakho ukwazi yonke into esizilungiselelwe zezi fowuni. Ungayilandela le ntetho bukhoma kule khonkco ingentla. Sukuphoswa yiyo! Siza kukuxelela yonke into malunga noluhlu, ukusuka nge-14: 30 siya kuba nedatha yokuqala malunga noluhlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Uyilandela njani inkcazo yeHuawei P30 bukhoma
Ukuhlaziywa kweTelegram ngokususwa komyalezo okuphuculweyo
I-Alcatel 1X 2019 isungulwe ngokusemthethweni eSpain